Special Offer During Home Stay - Diamond Inya Palace Condominium
Special Offer During Home Stay
Special Offer During Home StayMay 8, 2020
During staying at home, you will be able to findarange of rooms at the Diamond Inya Palace Condo in online and find out about the great rooms available.
Now for those of you who want to buyacondo at Diamond Inya Palace Condo
– Initial deposit (30%)
– Home Loan System
– Excellent Flexible Payment System
Get the above chances by making the registration and then the sales advisor will explain to you in detail about the Diamond Inya Palace Condo’s strengths, special offer, and what’s the payment you can buy.
Phone – 09 420097992 ~ 5/09 777898988-98
Address – No2, U Tun Nyein Road, Mayangone Tsp, Yangon Myanmar
Website – www.diamondinyapalace.com
ယခုလို Stay Home ကာလအတွင်းမှာ Diamond Inya Palace Condo ရဲ့ လူကြီးမင်းများအတွက် မိမိအိမ်မှာနေထိုင်ရင်း ကောင်းမွန်သော ကွန်ဒိုအခန်းများ အကြောင်းကို လေ့လာနိုင်စေရန် Online မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရုံဖြင့် အခန်းအမျိုးအစားများကို အသေးစိတ် လွယ်ကူသိရှိနိုင်အောင် အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိပြီး အထူးအစီအစဉ်များဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်စေရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်..
ကွန်ဒိုအခန်းများကို ဝယ်ယူလိုသော လူကြီးမင်းများအတွက် ယခုအခါတွင်လည်း
– ကနဦး ပေးသွင်းငွေ (၃၀%)
– သက်သာသော ဘဏ်အတိုးနှုန်း (Home Loan System)
– ကောင်းမွန်သော Flexible Payment Plan အစရှိသည့် အခွင့်အရေးများကို အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ Register ပြုလုပ် စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ပါက Sale Advisor များက Cobdo ၏ အားသာချက်၊ အထူးအခွင့်အရေးများဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ရှင်းပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ….
Phone Number -09 420097992~5 / 09 777898988-98